Taariikhdu waxbay hagtaa, dadkuna wuu haybiyaa……Dhacdo kasta oo dunida ka dhacdaa raad ayey ka tagtaa, siiba dhacdooyinka murgada leh ee ay ka mid yihiin Xasuuqa iyo dil wadareedka lagu bartilmaamaysto Isir iyo Qoomiyad gaara oo aan waxba galabsan. sida caadiga ah wax kasta oo la qariyaa ma qarsoomaan, wakhti kasta ha qaadatee wax badan ayaa la ogaadaa marka muddo ka soo wareegto. Waxa jira Hadal Murtiyeed uu yidhi abwaan Abdi-Gahayr oo iminka lagu maahmaaho, kaas oo ah*Cuqub halkii lagu galay ayey Caw Ku hurudaa* Dulucda Murtidu xambaarsantahay ayaa ah Danbi kasta halkii lagu galay ayaa laga Ogyey, cid kasta oo gashayna waa la ogyey ama waa la ogaan-doonaa. Waxa aan xasuutaa muddo iminka ku dhaw labo sano ayaa xaflad soo dhaweyn ah lagu qabtay Xarunta Golaha Wakiilada Somaliland, Xafladaa ayaa lagu maamuusay oo lagu soo dhaweeye Duuliye Soomaaliyeed oo diiday in duqeeyo Hargeysa iyo Hareeraheeda oo markaas ay wadhnaayeen Shacab diifaysan oo ka sii qaxaayey dagaalkii ka socda Magaalada. Duuliyaha ayaa hubkii uu dayaarada ku siday ku daadiyey Badda, Dayaaradiina fadhiisiyey Jabuuti. Duuliyahaa Soo dhaweynta iyo Xafladaha ay taariikhdu ku xustay, waxa ka dhaw oo iyana ay taariikhdu maanta xusaysaa Duuliyeyaashii Soomaaliyeed iyo kuwii Shisheeye ee sida Axmaqnimada ah ugu garaacay Bambooyinka iyo hubka culus Maatadii iyo Caruurtii qaxaysay, kuwaas oo Magacyadoodii iyo meelaha ay dhalasho ahaan ka soo jeedeen aan ku bayaamindoono Qoraalkan badhtankiisa iyo Gabogabadiisa-ba.
Sanadkii-1983…Dowlada Imaaraadku *UAE* waxay Somalia deeq ahaan u siisay 14 Dayuuradood oo noocoodo kala ahaa:10 dayaaradood oo ahaa Huntersiyo 4 dayaaradood oo ahaa nooca loo yaqaano Islander. Ciidankii cirka ee Somalia wuxuu u baahday khubaro aqoon u leh dayaaradaha dagaalka ee Hunters-ka, kuwaas oo la doonaayey in ay tababar siiyaan saraakiil Soomaliya. Ganacsade La yidhaado Jama Guuleed Abdi (Jama Buluug) oo Xigto hoose yihiin Ahmed Saleebaan Dafle, si gaarana ugu xidhnaa Siyaad Bare iyo inta ka ag dhow ayaa hawshii keenida khubarada Hunters-ka loo xilsaaray. Mr. Jama-Buluug oo Xaruntiisu Nairobi ahayd waxa uu qandaraas Naas-nuujin ah ku helay dabayaaqadii 1982 Keenista Shiidaalka Dayaaradaha yar-yar ee noocoodu yahay*Seimarcceti super petrol nooca Avion-cento ottoni* Waxa kale oo Qandaraas lagu siiyey Jama-Buluug inSouth Africa iyo Zimbawi ka soo kireeyo 4 Duuliyeyaal iyo 4 Farsamoyaqaan oo ku shaqeeya qaab calooshood-u-shaqaystenimo ah, ku darso oo waliba waxa South Africa wakhtigaa Gacnta ku hayey Xukunkii Cunsuriga ahaa ee la odhan jiray Aparthied. Jama-Buluug oo qaab musuq ah ugu milmay Taliskii Ciidankii Cirka ayaa xafiis ka furtay saldhigii dayaaradaha ee Balidoogle oo u dhawaa Baydhabo, halkaas waxa laga abaabulay tababarkii ugu horeeyey ee Caddaankii South Africa laga keenay ay u fureen Saraakiishii kala ahaa:
Sahankii ka dib waxa la qaaday weerarkii lagu doonaayey in lagu soo afjaro halgankii SNM., Duqayntii cirka iyo dhulkaba waxa ay si xidhiidha oo aan kal-g’olahayn habeen iyo maalinba u socotay muddo dhowr bilood ah. Gaashaanle Sare Duuliye Yuusuf Maxamed Maxamoud *Yuusuf yare (Majeerteen) oo waday Mig 17 waxa uu duqeeyey goob kasta oo uu ku arkay Bidhaan dad iyo duunyo, Xataa Xoolaha nool ee Miyaga daaqaaya muu dhaafi jirin. ninkaas oo Gacan-ku-dhiigleMoorgan ku abaal mariyey lacag faro badan iyo Gaadhi *Landcruiser* ah waxa loo aqoonsaday in uu yahay Sarkaalkii Kaalinta kowaad ka qaatay Burburkii dhinaca cirka ee loo gaystay Somaliland iyo Shacabkeedii.
Inkasta oo Calooshood u shaqaystayaashii Shisheeye ay dad shacab ah Gumaadeen Hanti badan burburiyeen haddan aakhirkii lafahoodii ayey u baqeen oo wey soo carareen. Duuliye Blythe Wood inta uu xakamaha u jaray dayaaradii uu watay ayuu isna Baarashuud ama Dallad kaga booday, Dayaaradiin-na waxay ay ku dhacday meel la yidhaahdo Dallandoolle oo katirsan Degmada Buur-xakabo. Jama iyo Diini mar la weydiiyey in ay ku noqonayaan dagaalkii, waxa ay ku jawaabeen hadal la macno ah Murtida tidhaahda. *Adiguba Caqlaad leedahee Carar